Pejy hanaovana fanomezana an-tserasera, mitady mpanome fanomezana ve ianao? | Vaovao momba ny gadget
Mitady pejy hanaovana fanomezana? Efa mba te-hihazakazaka manome ve ianao nefa tsy manana taratasy kely eny an-tànany? Ity sy ny toe-javatra vitsivitsy hafa dia mety hitranga amintsika amin'ny fotoana rehetra, ireo "taratasy kely" ireo no singa tena ilaina hametrahantsika ny anaran'ireo olona samihafa afaka mandray anjara amin'ny raffle hahazoana loka.
Ho an'ity karazana tranga ity dia ampirisihinay hampiasa rindranasa mahaliana iray izay manana ny anarana Flucky ary izay fa tsy tapa-taratasy kely dia marika marika maro loko no ampiasainao izay tsy maintsy hanoratantsika ny anaran'ny mpandray anjara amin'ny antsapaka. Amin'ny farany dia a mpanome fanomezana izay ahafahantsika manao anarana manao sary mora foana sy haingana.
1 Ahoana ny fomba handaminana sary amin'ny roulette an-tserasera ao Flucky
1.1 Ahoana ary maninona no atao fanomezana anarana
2 Pejy hanaovana fanomezana
2.1 Sary 2
2.3 Alefaso amin'ny vintana
2.4 fitaovana ara-tsosialy
Ahoana ny fomba handaminana sary amin'ny roulette an-tserasera ao Flucky
Voalohany aloha dia mila mankany ianao Tranonkala ofisialin'i Flucky, mahita anao amin'ny tranga voalohany miaraka amina interface madio madio tanteraka. Mankany amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny fikandrana fitetezana ianao dia hahita mpandahateny kely, izay azonao atao ho moana raha manindry fo anao ny mozika ao ambadika. Eo anilan'ity kisary ity dia misy iray hafa kely miendrika «i», izay manandrana manome vaovao momba ny fomba tokony hiasanao miaraka amin'ity fitaovana kely ity, zavatra iray izay tsy ilaina intsony satria hikarakara azy io isika amin'izao fotoana izao .
Eo amin'ny faran'ny efijery fandraisana dia misy bokotra kely milaza hoe «Start«, Izay tsy maintsy tsindrio mba hanombohana ny lalao eo no ho eo.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana an'ity bokotra kely ity dia hiova kely ny interface Flucky ao amin'ny fikandrana fitetezana, satria ampidirina ho eo amin'ny ilany havia ny sidebar. Ao no hahitanao saha kely misy ilay hafatra «Manampia olona» (na amin'ny teny anglisy) miaraka amina bokotra mena misy ny marika "+". Eto dia tsy maintsy ampidirinao ny anaran'ny mpandray anjara tsirairay avy eo tsindrio ny bokotra "Enter" na safidio fotsiny ny bokotra mena (miaraka amin'ny marika "+")
Avy hatrany dia hiseho eo ambany ity pejy ity ihany ilay anarana napetrakao, miaraka amin'ny loko manokana. Amin'ny lafiny ankavanana, fa tsy izany dia hisy boribory hiseho, izay tena hisy ny roulette virtoaly kely. Azonao atao ny manampy anarana maro araka izay tadiavinao ao amin'ny bara eo amin'ny ilany havia, arakaraka ny isan'ny mpandray anjara izay ho anisan'ity sary ity amin'ny roulette virtoaly.
Raha heverina fa nanisy anarana 10 eo ho eo ianao, dia hiseho ankavia eo ambonin'ny boaty iray izy rehetra miaraka amin'ny loko voafaritra tsara; amin'ny ilany ankavanana fa tsy ny fizaran-tany (boribory) dia hiseho mizara fizarana 10, samy manana loko hafa. Ity ampahany amin'ny lalao ity dia tena mora fantarina, satria ny loko tsirairay hita eo amin'ny kodiarana dia ho an'ny anarana tsirairay izay hita eo amin'ny sisiny ankavia.
Raha vantany vao nofaritantsika ny anaran'ireo mpandray anjara rehetra, dia tsy hifidy afa-tsy ny bokotra eo ambany izahay manao hoe «Go«, Mba hanjavona vetivety ilay bara misy ny anarana. Amin'izay fotoana izay dia hisy tanana hiseho izay hanandrana hamily ity kodiarana ity.
Toy ny hoe eo alohan'ilay roleta tena izy isika, dia tsy maintsy miandry an'ity virtoaly an'i Flucky ity hijanona amin'ny loko manokana; rehefa mitranga eo afovoan'ny varavarankely izany hiseho ny anaran'ilay mandresy, mitovy amin'ilay loko nijanonan'ny roulette ity.
Flucky dia rindranasa iray mahaliana izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana fialam-boly miaraka amin'ny namana sy fianakaviana, afaka manome karazana zavatra rehetra ananantsika ary na dia, ataovy ity roulette ity izay manapa-kevitra hoe iza no hanao karazana fivalozana. Noho ny fisian'ity rindran-tranonkala ity miankina amin'ny mpizaha Internet fotsiny, azontsika atao ny mampandeha azy amin'ny karazana sehatra rehetra, izany hoe amin'ny Windows, Linux na Mac.
Ahoana ary maninona no atao fanomezana anarana
Amin'ny fotoana anaovana raffle, arakaraka ny maha-zava-dehibe azy, dia azo inoana fa ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mampiasa fampiharana na serivisy web ahafahantsika manatanteraka an'io karazana raffle io tsy misy ilana azy. boaty misy ny anaran'ireo mpandray anjara sy ny fahefan'ny mpisolovava mijaly fiampangana hafa tongo.
Ny fanomezana dia nanjary fitaovana tena tsara rehefa tiantsika mampahafantatra ny tenantsika amin'ny tambajotra sosialy, indrindra rehefa avy namorona orinasa izahay ary te hanomboka hamarana ny mpanjifanay. Ho fanampin'izay, hitombo ny fahitana eo amin'ireo mpanaraka antsika rehefa manatanteraka ny tsangan-tanana isika, satria ny iray amin'ireo fepetra takiana tsy maintsy arahinay dia ny zaraina amin'ny tambajotra sosialy an'ny mpampiasa mba hahatratra ny isan'ny olona betsaka indrindra ny orinay azo atao.
Soa ihany amin'ny Internet fa afaka mahita fampiharana sy serivisy marobe mamela antsika hanatanteraka azy ireo isika. Toy ny fitsipika ankapobeny, ny fiasan'izy rehetra dia tena tsotra, satria miankina amin'ny karazany nofidintsika dia mila fotsiny isika ampidiro ny anaran'ireo olona voarohirohy rehetra hanombohana ny fisarihana.
Pejy hanaovana fanomezana
Sary 2 mamela antsika hiditra ny isan'ny mpandray anjara izay ho anisan'ny raffle miaraka amin'ny isan'ny loka tadiavinay. Ohatra, raha te-hanome loka telo ho an'ny olona 10 isika, ny anaran'ireo olona telo monja dia tsara vintana no nandresy azy ireo. afaka zarao amin'ny alàlan'ny Facebook, WhatsApp ny valiny na hamoaka azy ireo amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny kaody HTML izay manome anay ny valiny. Maimaimpoana ity karazana fanapahana ity. Raha te-hanome mangarahara amin'ny fisarihana isika, Sortea2 dia manolotra antsika an'io safidy io amin'ny 2,99 euro.
Ity tranokala ity no manome ny safidy tsara indrindra sy ny safidy momba ny fanaovana raffles. Ao amin'ny randorium afaka mihazakazaka ny tsatokazo amin'ny alàlan'ny mailaka isika, amin'ny lisitry ny mpandray anjara, amin'ny ekipa na amin'ny isan'ny isa. Ny raffle tsirairay avy dia ahafahantsika manampy sary mampiavaka azy io, ny isan'ny mpandray anjara, ny mpandray anjara farafaharatsiny ary ny isan'ny vidiny hozaraina. Tsy maintsy ampiana famaritana faran'izay betsaka amin'ny litera 400 momba izay amboarintsika miaraka amin'ireo fototr'ilay izy sy ny daty hanaovana azy.
Azontsika atao ihany koa ny mamaritra ny andro sy ny fotoana hanaovana ny antsapaka. Raha vantany vao nampidirinay ny angon-drakitra rehetra mifanaraka amin'ny fisarihana izay ho entinay, tsindrio ny famoahana ny sary. Haneho amintsika kaody HTML ny pejy web hampidirina ao amin'ny pejin-tranonkalantsika. Afaka manao izany koa isika zarao amin'ny alàlan'ny media sosialy hahafahan'ny olona mandray anjara.
Alefaso amin'ny vintana
Ity pejy ity dia ahafahantsika manao raffle tsotra, miaraka amin'ny anaran'ireo mpandray anjara, mandrindra fifaninanana misy loka, manipy vola madinika hahitana hoe iza no mpandresy, maka karatra iray, manodina dice ... Anisan'ireo safidin'ny raffles Manolotra antsika io Alefaso amin'ny vintana, azontsika atao ny mametraka fa azy manokana, eo amin'ireo mpandray anjara izay manoloana ny solosaina na ok apetraho amin'ny pejinay facebook izany. Na dia marina aza fa ny safidy hanatanterahana ny raffles dia tena samy hafa, ny estetika sy ny valiny atolotray antsika dia mifanakaiky.
Ity fitaovana ity dia iray amin'ireo fitaovana feno indrindra izay hitantsika amin'ny Internet, satria mamela antsika hamorona fifaninanana horonantsary, sary, tantara ary mamela antsika ampidiro ao amin'ny Twitter, Facebook ary Vimeo izy ireo ankoatra ny hafa. Socialtools Maimaimpoana izany raha tsy manana mpanaraka mihoatra ny 300 ianao, noho izany dia fitaovana tsara indrindra raha te hampahafantatra ny marika izahay ary hahazo mpanaraka marobe.
Agorapulse no fitaovana tsara indrindra hitanay mba hampiroboroboana ny fampiasana ireo tambajotran-tseraseranay amin'ny alàlan'ny famoronana raffle sy fifaninanana. Ity serivisy ity manolotra statistika anay amin'ny fotoana tena izy ankoatry ny famelana antsika hizara ny valiny amin'ny fotoana tena izy miaraka amina sary mitovy amin'izany hijerena ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Ireo fiasa azo atao amin'ny fanaovana sweepstakes amin'ny Facebook sy Twitter dia manana vidiny mirary tokoa, ka afaka manomboka mampiasa azy isika nefa tsy mila mampiasa vola be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Generator fanomezana
Mark Chourio dia hoy izy:
Tena tiako ilay izy, io fotsiny no tadiaviko, fa rehefa omeko an'i RESTART dia voafafa daholo ary tsy maintsy manomboka hatrany am-boalohany aho dia tsy afaka manohy milalao ... Misy tolo-kevitra ve? na roulette hisintomana na hampihatra amin'ny kaody? Misaotra!
Valiny tamin'i Marcos Chourio
milead dia hoy izy:
Miombon-kevitra amin'ny hevitra teo aloha aho. Raha mbola tsy misy manazava izany ny olona iray dia IRAY IHANY no ampiasaina. Avy eo ny fanindriana Restart dia mamafa ny zava-drehetra ary manomboka indray. Mampalahelo fa tsy manome safidy hafa hisarihana.
Mamaly an'i Milead
izay ilazana hoe "mizara" dia tsy maintsy maka tahaka ny url manontolo ianao ary apetaho ao anaty tranokala ary hiseho izany, mba hanombohana fanomezana vaovao, fahombiazana
Salama, te hahafantatra izay isan'ireo mpandray anjara faratampony tohanan'i Fluky aho. Hanao fanomezana Facebook aho ary tsy fantatro hoe firy ny olona handray anjara. Misaotra anao
Ny Nokia 8 dia efa misy famandrihana any Espana izao